ကလေးများအတွက် ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့ သရေစာ ၂၇မျိုး - Hello Sayarwon
သရေစာစားချိန်ဟာ ကလေးတိုင်းရဲ့ အကြိုက်ဆုံးအချိန်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သင့်ကလေးကို အသင့်စားနိုင်အောင် ပြုပြင်ထားတဲ့ စားစရာတွေ၊ သကြားများတဲ့ စားစရာတွေ မကျွေးသင့်ပါဘူး။ ယခုဖော်ပြမယ့် သရေစာ ၂၇မျိုးကို စမ်းကျွေးကြည့်ပါ။ သင့်ကလေး ပျော်ရွှင်ပြီး ကျန်းမာသန်စွမ်းပါလိမ့်မယ်။
ကလေးများကို သရေစာ ဘယ်နှကြိမ် ကျွေးသင့်လဲ
ကလေးများအတွက် သရေစာတွေကို အစားတကြိမ်နဲ့ တကြိမ်ကြား ကျွေးနိုင်ပါတယ်။ နေ့လယ်ပိုင်းမှာ ကျွေးတဲ့သရေစာဟာ ညစာစားသည့်တိုင်အောင် အာဟာရနဲ့ စွမ်းအင်ကို ပေးနိုင်ပါတယ်။ ပုံမှန်အချိန်နဲ့ စားတဲ့ သရေစာများဟာ သင့်ကလေး ဆာပြီး ဂျီမကျအောင် အကူအညီပေးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သရေစာစားတာ လွန်သွားရင်လည်း ညစာလွတ်သွားနိုင်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင် အချိန်မှန်အောင် ဘယ်လို ရွေးချယ်ကြမလဲ။ သင့်အနေနဲ့ ကလေးတွေ ဆာနေပုံရတဲ့အချိန်မှ ကျွေးသင့်ပါတယ်။ ဒါဟာ သူတို့ဘဝတလျှောက်လုံးအတွက် ကျန်းမာရေးနဲ့ညီတဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်ထိန်းသိမ်းနိုင်အောင် အခြေခံကောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
– အနပ်ငယ်၆မျိုးကို စဉ်းစားပါ။ ကလေးရဲ့ သရေစာစားခြင်းဟာ ထမင်းအနပ်ကြီးစားဖို့ ဗိုက်ပြည့်သွားတာမျိုး မဖြစ်ရပါဘူး။ တနေ့ကို အစာ၃ကြိမ်စားမယ့်အစား အကြိမ်ခွဲပြီး နည်းနည်းစီနဲ့ တနေ့လုံး ကျွေးကြည့်ပါ။ ဒါဟယ သင့်ကလေးကို ဗိုက်ပြည့်စေပြီး သွေးတွင်းသကြားဓါတ်နဲ့ စွမ်းအင်ပမာဏကို တနေ့လုံး ထိန်းသိမ်းပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
– အချိန်ဇယားသတ်မှတ်ပါ။ အချိန်သတ်မှတ် ကျွေးတာဟာ သင့်ကလေး ဆာပြီး ဂျီကျခြင်းမှ ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။ အချိန်ဇယားကို အတိအကျကြီးတော့ လိုက်နာစရာမလိုပါဘူး။ အကြမ်းဖျဉ်းလောက် သတ်သတ်မှတ်မှတ် ကျွေးရင် အဆင်ပြေပါတယ်။ ရိုးရိုးရှင်းရှင်း သတ်မှတ်ရရင် မနက်စာတကြိမ်၊ နေ့လယ်စာမတိုင်ခင် သရေစာ တကြိမ်၊ နေ့လယ်စာ တကြိမ်၊ မွန်းလွဲပြီး သရေစာ တကြိမ်၊ ညနေစာ တကြိမ်၊ အိပ်ရာမဝင်ခင် သရေစာ တကြိမ် စသဖြင့် ကျွေးနိုင်ပါတယ်။
– တစွတ်စွတ်စားခြင်းကို ရှောင်ပါ။ တနေ့လုံး စားစေခြင်း မပြုပါနဲ့။ တနေ့လုံး တစွတ်စွတ်စားနေခြင်းဟာ အစားလွန်ပြီး အဝလွန်စေတဲ့အတွက် မကောင်းတဲ့ အမူအကျင့်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ကလေးများအတွက် ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့ သရေစာစိတ်ကူး
– စည်သွပ်ဆယ်မွန်ငါးကို အဆီနည်းတဲ့ မယွန်းနေ့စ်နဲ့ ရောပြီး ခရက်ကာနဲ့ ရောကျွေးပါ။
– ပန်းသီးကို စိတ်ပြီး ဒိန်ခဲ ဒါမှမဟုတ် ပဲစေ့ထောပတ်နဲ့ ကျွေးပါ။
– တူနာငါးကို ပေါင်မုန့်နဲ့ညှပ်ကျွေးပါ။
– ခရမ်ချဉ်သီးအချဉ်နဲ့ ဒိန်ခဲသုတ်ပြီး ပီဇာအငယ်စား လုပ်ကျွေးပါ။
– ပေါင်မုန့်ညို (သို့) ဂျုံခရက်ကာကို အဆီနည်းတဲ့ ဒိန်ခဲနဲ့တို့ကျွေးပါ။
– သခွားသီး၊ ငရုတ်ပွကို အဆီနည်းတဲ့ ဆော့စ်နဲ့ အတူ ကျွေးပါ။
– အေးခဲထားတဲ့ သကြားမပါတဲ့ အသီးခြောက်များကို နို့နဲ့ရောကျွေးပါ။
– ဂျုံကြမ်းနဲ့လုပ်ထားတဲ့ ချပါတီကို ဆော့စ်၊ ဒိန်ခဲတို့နဲ့ စိမ်ကျွေးပါ။
– အသီးများကို နို့နဲ့ကျွေးပါ။
– ခရက်ကာကို ပန်းသီးဆော့စ်နဲ့ ကျွေးပါ။
– ဘီစကစ်ပြား၊ ပဲပြား ဒါမှမဟုတ် ဆန်ကိတ်မုန့်ကို ဒိန်ခဲပါးပါးလှီးပြီး ရောကျွေးပါ။
– ဂျုံကြမ်းနဲ့လုပ်ထားတဲ့ ခရက်ကာကို မက်မွန်သီး ထောပတ်နဲ့ ကျွေးပါ။ ၁၀၀% အသီးဖျော်ရည် ၄-၆ အောင်စလောက်တိုက်ပါ။ (ကာဗွန်ထည့်ထားတဲ့ အသီးဖျော်ရည်ကို ခပ်ကျဲကျဲလုပ်ပြီးတော့လည်း တိုက်နိုင်ပါတယ်။)
– အသီးနဲ့ အစေ့ ဒိန်ချဉ်လုပ်ကျွေးပါ။
– ဂျုံကြမ်းနဲ့ အမျှင်ဓါတ်များတဲ့ အစေ့အဆန်များကို နို့နဲ့ရောကျွေးပါ။
– အဆီနည်းတဲ့ ဒိန်ချဉ်၊ ရေခဲ၊ အသီးများ (ငှက်ပျောသီး၊ စတော်ဘယ်ရီ၊ ဘလူးဘယ်ရီ၊ သခွားမွှေးသီး) ကို smoothie ဖျော်ကျွေးပါ။
– အဆီနည်းတဲ့ ဒိန်ချဉ်ကို ဘယ်ရီသီးနဲ့အတူ ကျွေးပါ။
– ငှက်ပျောသီးကို ပါပါးလှီးပြီး ဒိန်ခဲမှနှစ်ပါ၊ cereal နဲ့ရောလိပ်ပြီး ကျွေးပါ။
– အဆီနည်းတဲ့ ဒိန်ချဉ်ကို ကွေကာ၊ ဒါမှမဟုတ် လတ်ဆတ်တဲ့အသီးများနဲ့ ရောကျွေးပါ။
– ပန်းသီး၊ မက်မွန်သီး၊ သစ်တော်သီးများကို ပါးပါးလှီးပြီး သစ်ကြမ်းပိုးခေါက်ဖြူးပြီး ဒိန်ချဉ်နဲ့ရောပါ။ မိုက္ကရိုဝေ့ဗ်နဲ့ ချက်ကျွေးပါ။
– ကြက်ဆင်သားနဲ့ ဒိန်ခဲကို ကော်ပြန့်လိပ်ကျွေးပါ။
– Hummus ဟာ အရသာရှိပြီးသားပါ။ မုန်လာဥနီ၊ ခရက်ကာတို့နဲ့ ရောကျွေးရင် ပိုကောင်းပါတယ်။
– ရက်စ်ဘယ်ရီ၊ စတော်ဘယ်ရီ၊ လိမ္မော်သီး၊ သရက်သီး၊ နာနတ်သီး၊ ကီဝီသီး၊ စပျစ်သီး၊ ဘလူးဘယ်ရီ စတာတွေကို ရောင်စုံဖြစ်အောင် တုတ်နဲ့သီကျွေးတာ ကလေးတွေကို ပိုပြီးစားချင်စိတ် ဖြစ်စေပါတယ်။
– မက်မွန်သီး၊ ရက်စ်ဘယ်ရီး၊ လိမ္မာ်ရည်၊ ကြက်ဥနို့ပေါင်း စတာတွေကို ရောပြီး smoothie လုပ်ကျွေးပါ။
– မလိုင်ထုတ်ထားတဲ့ ဒိန်ခဲကို မက်မွန်၊ နာနတ်သီး၊ ငှက်ပျောသီးတို့နဲ့ ရောကျွေးပါ။
– ခရက်ကာကို ဒိန်ချဉ်၊ ငှက်ပျောသီးတို့နဲ့ ရောကျွေးပါ။
– ခရက်ကာကို အဆီနည်းတဲ့ ဒိန်ခဲနဲ့ညှပ်ပါ။ ၁၀၀% အသီးဖျော်ရည် ၄-၆ အောင်စလောက်နဲ့ ရောကျွေးပါ။ (သကြားပါဝင်နှုန်းလျော့အောင် ဖျော်ရည်ကို ရေရောနိုင်ပါတယ်)
Healthy Snacks for Kids: 27 Toddler-Friendly Ideas. http://www.whattoexpect.com/toddler-nutrition/healthy-snacks-for-kids.aspx. Accessed September 28, 2016.
Snacks for kids recipes. http://www.bbcgoodfood.com/recipes/collection/snacks-kids. Accessed September 28, 2016.